Medicine "Grippol plus" kuyinto umkhuhlane, inactivated, subunit polymer, wokugoma trivalent. Isetshenziselwa kokubili ongama kanye nokuphathwa esicutshini.
Umgomo "Grippol plus" siqukethe antigen zokuzivikela behlukene ukuhlanzwa umkhuhlane virus izinhlobo A no-B, etshalwa ezindaweni amaqanda. Minyaka yonke, ngokuhambisana ngokuqinile ushintsho isimo epidemiological kwenziwe futhi sishintsha Ukwakheka antigenic komjovo.
Ukulungiswa uketshezi kancane opalescent okuyinto noma kungekho nto enemibala emihle noma has a kwe-tint aphuzi. Ukusetshenziswa leli thuluzi kusiza ukwakha ukungatheleleki ngokumelene umkhuhlane. imithi Effect Its "Grippol plus" iqala esikhathini esingangesonto nengxenye ngemva isingeniso umzimba, futhi umphumela wawo okuqhubeka iminyaka. Umgomo eliphumelelayo iziguli zanoma iyiphi iminyaka. Ngo 75-95% wabantu zigonywe abazimisele Umkhuhlane amagciwane zokuzivikela omzimba titers. Kusukela izidakamizwa ingena immunomodulator - polyoxidonium, it kwandisa inkumbulo immunological futhi ukunciphisa xhumelela umthamo antigen. Iphinde kuthuthukisa ukumelana nezinye izifo ngenxa yokuthi ukuthi ukulungiswa isimo somzimba sokuzivikela ezifweni.
Medicine "Grippol plus": yokusetshenziswa
Umuthi senzelwe prophylaxis ethize Umkhuhlane abadala kanye nezingane zabo bonke ubudala, kusukela ngo-iminyaka emithathu.
Ikakhulukazi ikhombisa ukusetshenziswa umgomo "Grippol plus" kulezi zimo ezilandelayo:
- uma kukhona ingozi yezinkinga umkhuhlane. Lokhu kusebenza izingane esikoleni futhi esikoleni, kanye abantu umhlalaphansi. Futhi kulesi sigaba yilabo ngokuvamile Ari ukugula, isifo izinhlelo zokuphefumula futhi senhliziyo, isifo sezinso, isifo sikashukela kanye iziyaluyalu umzimba, kanye komzimba nezinto lutho;
- abantu, ngokusebenzisa ukuzibonakalisa kwabo abasengcupheni yokuthola umkhuhlane futhi lingathelela abanye. Kuyinto izigaba ezifana abasebenzi ukuhweba, abasebenzi bezempilo, abasebenzi amasevisi zenhlalo kanye nezikhungo zemfundo, kanye ezempi namaphoyisa.
Nokushintsha kokudla nokufakwa umuthi "Grippol plus"
Ngokuvamile, lokugoma Kwenziwa ekwindla kanye ekuqaleni kobusika noma ngaphambi kokuqala nenqwaba umkhuhlane labantu. Umgomo injected umsipha noma ezijulile ngaphansi kwesikhumba e isamba 0.5 ml. Ngokuvamile abantu abadala kuthiwa ijovwe ku imisipha deltoid, nezingane - phambi ethangeni. Ngaphambi ukwethulwa isitsha wokugoma kufanele ukufuthelana ekamelweni lokushisa anikine kahle. Umuthi iqondiswa singly.
Ephambi kwezinduna immunodeficiency nalapho ethola ukwelashwa immunosuppressive kungenzeka iqondiswa kabili 0.5 ml wokugoma nge esingaba inyanga eyodwa.
Ngosuku lapho lokugoma kuhlelwe, isiguli kumele ngempela ukuhlola lo dokotela futhi abe izinga lokushisa. Uma izinga lokushisa komzimba ngenhla 37 ° C, lokugoma ongakwazi ukuzenza. Kuleso simo kukhona umonakalo ebonakalayo ampoules noma izitsha eziyisikhombisa ne izidakamizwa, kanye nokushintsha ukubonakala kwawo enze inqubo ukusetshenziswa yayo akuvunyelwe. Noma lokugoma iphelelwe isikhathi imithi "Grippol plus" noma lapho izimo awazange wahlangana obereganiya yayo.
Lokhu umuthi ukuhlanzwa kakhulu futhi ngenxa yalokho, izinkinga ngokuvamile ngemva lezokuphatha asivelanga. Ezimweni ezingavamile, kungase kubangele soreness futhi ububomvu kusayithi umjovo. Akuvamile kungaba bekhanda, umphimbo obuhlungu, imfiva okuncane, amakhala yisisu. Uma avele lezi zimpawu, ayanyamalala bebodwa emva kwezinsuku ezimbalwa. Njenganoma iyiphi wokugoma, abanye abantu bangase babe myalgia, paresthesia, komzimba nezinto, iziyaluyalu esithinta izinzwa, neuralgia.
Akunakwenzeka ukusebenzisa leli thuluzi ebukhoneni izifo kanye nezimo acute febrile, ebukhoneni acute izifo zokuphefumula nezifo sibi emathunjini. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ukuzinza we lokugoma kungenziwa kwenziwe lokushisa.
Le filimu "Boomer 2": abadlali amafilimu abadumile, ukhanda yabo emva sokudubula